Muuri News Network » SAWIRRO: Muuqaalka Magaalooyinka Dhuusamareeb & Cadaado oo isbedelay & Taangiyo..
SAWIRRO: Muuqaalka Magaalooyinka Dhuusamareeb & Cadaado oo isbedelay & Taangiyo..
Magaalooyinka Dhuusamareeb & Cadaado ayaa la ciirciiraya wufuudii ugu badneyd ee u soo martisa taariikhdeeda iyadoo ay ku qulquleen, odayaal dhaqameed, xildhibaanno, siyaasiyiin iyo madaxda dowladda Soomaaliya.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa marti gelineysa 16-ka bishan xaflad weyn oo isugu jirta midowga maamullada Ahlu suna iyo Galmudug iyo booqashada madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo, waxaana garoonkeeda yar uu noqday goob mashquul ah oo maalin kasta ku dhowaad 10 duulimaad ay ka degaan.
Dhuusamareeb ayaa la ciirciireysa martidii ugu badneyd, iyadoo ammaanka si weyn loo adkeeyay, waxaana lagu wadaa inay saacadaha soo socda ilaa maalinta berri ah tagaan wafdiga madaxweye Farmaajo iyo madaxda maamul Goboleedyada.
Ciidamada AMISOM ee ka socda Jabuuti ayaa ka qeyb qaadanaya sugidda ammaanka magaalada, waxaana sidoo kale Ahlu sua ay ku diyaarisay ciidamadii ugu badnaa oo dhinac kasta magaalada ka xiray.
Magaalada Cadaado ayaa lagu wadaa inuu ku hormaro madaxweyanaha, iyadoo kadibka uu tegi doono Dhuusamareeb, waxaana hoos ka muuqda sawirrada labada magaalo iyo qabanqaabada ka socota: